सवारी दुर्घटनामा परी उपचारत कलाकार निसा घिमिरेलाई आर्थिक अभाव, गायिका टीका सानुले गरिन् सहयोगको अपिल ! – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २९, २०७८ समय: १२:०७:१७
काठमाडौं ।कलाकार निसा घिमिरे अहिले जिवनमरणको दोसाँधमा हुनुहुन्छ । उहाँको जीवन रक्षाको निम्ति अनेकौं सकारात्मक मनहरु विभिन्न अभियान मार्फत जुट्दै हुनुहुन्छ । उहाँको कलाकारीता राम्रो हुँदै थियो तर पढाईको क्रममा भारत जाँदा सवारी दुर्घटना भएर अहिले ओछ्याना छटपटाई रहनु भएको छ
PicsArt_06-10-10.25.35.jpg पहिले र अहिलेको यो अवस्था देख्दा मेरो मात्र होइन देख्नी जो कोहिको पनि आँखा रसाउछ होला सायद! एउटा राष्ट्रको गहना निशा उपचारको अ’भावले जीवनमर’णको दोसाँधमा हुनुहुन्छ। मेरो अनुरोध हाम्रो सानो सहयोगले निशा पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्नुहुन्छ त्यसैले स’हयोगी मनहरुले सहयोग गर्न चाहनु भयो भने कृपया तल दियको खाता नम्बर वा सिधै फोन गरेर पनि साथ दिन सक्नुहुनेछ।
सहयोगको लागि :सनराइज बैंक (शाखा)गोटीखेल ललितपुर निशाका बुवा प्रेम प्रसाद घिमिरे खाता न. 0840613613205001 मा सहयोग गर्न सक्नु हुनेछ।”सवैमा सहयोगको लागि हार्दिक अपिल” (सहयोग का लागि सिधा सम्पर्क ; कलाकार निशा घिमिरेका पिता श्री प्रेम प्रसाद घिमिरे 9851238952 )
Last Updated on: June 12th, 2021 at 12:07 pm